आफ्नो तिघ्रा देखाएर सावुन दल्न थाल्नु भयो - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » आफ्नो तिघ्रा देखाएर सावुन दल्न थाल्नु भयो
मेरो भन्दा एक घर माथी मेरो काकाको घर थियो । सो काकाको घरमा एक फुपु वस्नुहुन्थ्यो । उहाँ म भन्दा करिव २ वर्षमात्र ठुली हुनुहुन्थ्यो । भनेपछि करिव २२ वर्षो फुपु हुनुहुन्थ्यो । फुपुले १० कक्षा सम्म पढ्नु हुन्थ्यो । एस. एल. सी. म संगै दिनु भएको थियो । म एस.एल.सी.को नतिजामा दोश्रो श्रेणीमा पास भए भने फुपु फेल हुनु भयो । त्यसपछि फुपुले पढ्न छोडनु भयो । म भने कलेज पढ्न थाले ।फुपुको वुवाको सम्पत्ती अथाह थियो, उहाँलाइ केहि गर्नु पर्दैन थियो त्यसैले उहाँ घरमै वस्नुहुन्थ्यो भने परिवारका अन्य सदस्य व्यवसायमा व्यस्त हुन्थ्यो । घरका महिला सदस्य पनि अन्य काममा व्यस्त हुन्थ्यो । फुपु कहिले काँही एक्लै घरमा हुनुहुन्थ्यो ।
एक दिन म कलेज सकेर चाँडै करिव दिउसो १ वजेनै घरमा आएको थिए । म घरमा आएर घर पछाडीको झयालवाट वाहिर रेहेर वसेको थिए । मेरो आँखा फुपुको घरको चौरमा पर्यो । फुपुको घरमा वाथरुम भए पनि आँगनमा पनि एउटा धारा थियो । फुपु वाथरुममा ननुहाइ सो आँगनको धारामा नुहाउदै हुनुहुन्थ्यो ।
फुपु सो धारामा नुहाएको मैले नदेखे झै गरे तर फुपुलाइ थाहाथियो उहाँले नुहाएको मैले हेरिरहेको छ भन्ने । फुपुले मलाइनै आफ्नो उत्तेजिन यौन प्यास मेटाउन आव्हान गर्नको लागि यस्ते हर्कत गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले देख्दै नदेखेको जस्तो पारी छड्के नजरले हेरी रहे । उहाँले आफ्नो नुहाउने क्रममा स्तन मुर्सार्न थाल्नु भयो । यसपछि विस्तारै आफ्नो तिघ्रा देखाएर सावुन दल्न थाल्नु भयो । पछि पेण्टि भित्र हात पसालेर सावुन लगाउन थाल्नुभयो । यसरी करिव आधा घण्टा सम्म गर्नुभयो । यो कार्यलाइ मैले कुनै आर्श्चर्यको रुपमा लिइन । पछि जव जव म कलेज वाट घर आएको थाहा पाउना साथ फुपुले आफ्नो वाथरुममा ननुहाइ सधैझै सो नियमित कार्य गर्न थाल्नु भएको मैले पत्तो पाए र मैले वुझेकी फुपुले मसंग यौन सर्म्पर्क राख्न चाहनु भएको छ भनेर र ।
यसरी नियमीत रुपमा फुपुले यो कार्य गर्न थालेपछि म एक दिन फुपुले नुहाइरहेको धारामै पुगे र फुपुलाइ सोधे किन यसरी सधै वाहिर नुहाउनु भएको वाथरुममा नुहाउनु भएको भए हुन्थ्योनी भने । त्यसपछि फुपुले भन्नुभयो तैले सधै मैले नुहाएको देखिरहेको थिइस वल्ल आज सोध्न आइस । ल ठिकछ मलाइ पछाडी सावुन लगाइदेत भन्नुभयो । फुपु म भन्दा २ वर्षजेठी भएकोले मैले उहाँको पछाडी सावुन लगाइदिएँ । फुपुले अलि तलपनि लगाइदे भन्न थाल्नु भयो । मैले जव तल सावुन लगाउन थाले फुपुले मेरो हात समातेर उहाँको अगाडी यौनी नेर मेरो हात राखीदिनु भयो र यहाँपनि सावुन लगाइदे भन्न थाल्नु भयो । मैले उहाँको इन्छा अनुसार सवै गरिदिए । यति गर्दागर्दै मेरो लिङ्ग उत्तेजित भैसकेको थियो । म चुप लागेर वस्न सक्ने स्थितिमा थिएन तैपनि म सहेर वसेँ ।
फुपुले नुहाइसके पछि मलाइ भित्र उहाँको कोठामा संगै लिएर जानुभयो । उहाँले आफ्नो शरिर पुछेर रुमालले वेर्नु भएको थियो । फुपुले केही समय पछि सो रुमाल आफ्नो शरिरवाट झिक्नु भयो र आफु र्सवाङ्ग हुनु भयो र उहाँले मेरो पनि एक एक गरेर लुगा फुकाल्नुभयो । त्यसपछि हामी दुवै निर्वस्त्र भयो । फुपुले मेरो लिङ्ग समातेर विस्तारै आफ्नो मुखमा राख्न थाल्नुभयो । धेरैवेर मेरो लिङ्ग फुपुले चुस्नु भयो यो कार्यले मेरो धैर्यको सिमा रहेन र म फुपुलाइ उत्तानो पारेर उहाँमाथी चढ्न मन लाग्यो । मैले त्यो इच्छा पुरा गर्न खोजेको त फुपुले दिनु भएन वरु फुपु उत्तानो परेर सुत्नुभयो र उहाँले मेरो पनि योनी तैले चाट्नु पर्छ अनि मात्र माथी चढ्न दिन्छु भन्नु भयो ।
मेरो धैर्यको सीमा थिएन म वाढ्य भएर उहाँको योनी चाट्न थाले यो मेरोलागि पहिलो अनुभव थियो । फुपुले विस्तारै लामो लामो स्वास लिन थाल्नुभयो र स्वा…स्वा… स्वा..र्.गर्न थाल्नु भयो । केहि समय यस्तो आवाज निकालेपछि । फुपुको योनीवाट वाढी आउन थाल्यो र योनी हिलो हिलो भयो त्यस पछि फुपु केहीवेरमा शान्त हुनु भयो ।
एकछिन पछि मेरो लिङ्ग फुपुले आफ्नो योनीमा राख्न अनुमति दिनुभयो तर फुपुको मेरो लिङ्ग सिथिल भैसकेको थियो । यो कुरा फुपुले थाहा पाउनु भएछ । त्यसपछि फुपुले फेरी मेरो लिङ्ग चुस्न थाल्नुभयो । केहीवेर चुसेपछि मेरो लिङ्ग साह्रै उत्तेजनामा आयो र मैले फुपुको मुखमै पिचकारी छोडे । फुपुको मुख भरी मेरो विउ परेछ । मुखवाट मेरो लिङ्ग फुपुले निकाल्नु भयो हामी दुवै शिथिल भयौं । हामी दुवैजना उहाँको कोठामा केही वेर आराम गर्यौ ।
केहिवेर पछि फेरी मलाइ एक पटक फुपुको इच्छा पुरा गर्न मन लाग्यो र हामी एक अर्कामाथी विपरित दिशामा सुतेर एक अर्काको माल चुस्न र चाट्न थाल्यौ र दुवैजना उत्तेजनामा आयौं र त्यस पछि फुपुको योनीमा मेरो लिङ्ग विस्तारै छिराउन थाले । फुपुको योनीवाट प्रसस्त पानी आएको हुनाले मेरो माल सजिलै भित्र छिर्यो र मैले करिव आधा घण्टा जती फुपुको योनीमा मेरो लिङ्ग भित्र वाहिर गर्यौ । त्यसपछि मेरो लिङ्गले पिचकारी छोड्न थाल्यो र मैले फुपुलाइ मेरो लिङ्गले पिचकारी छोड्न लाग्यो म भित्र योनीमै पिचकारी छोडौ भनेर सोधे । फुपुले हुदैन झर्नेवेलामा वाहिर निकाल्नु भन्नुभयो । यो आदेश मात्र के पाएको थिए मेरो लिङ्गले पिचकारी छोड्न खोजेर मैले मेरो लिङ्ग फुपुको योनीवाट वाहिर निकाले । मेरो लिङ्ग फुपुको योनीवाट निकाल्नासाथ फुपुले चुस्न थाल्नुभयो । मेरो पालो मैले फेरी फुपुको मुखमै झारीदिए घिउ । फुपु त्यसपछि शान्त हुनु भयो ।
केहिवेर आराम गरेपछि हामी आआफ्नो लुगा लगाउन थाल्यौं । यहिक्रममा मैले फुपुलाइ तपाइ त पोख्त हुनुहुदो रहेछ, तपाइले त विवाह पनि गर्नु भएको छैन कसरी यस्तो तरिका थाहा पाउनु भयो भनेर सोधें । फुपुले भन्नु भयो मैले यस्तो फिल्म हेरेको थिए भन्नु भयो । यसपछि फुपुले वेलावेलामा यस्तो रमाइलो गर्नु पर्छ है भन्नुभयो । मैले हुन्छ भनी आफ्नो घरमा आए ।
हामीले मौका पायौकी यस्तो कार्य गर्न थाल्यौ । हाल आएर थाहा भयो यस्ता आफ्नो नातामा यौन सम्पर्क राख्ने कार्यलाइ हाडनाता करणी भन्दो रहेछ र यो एक प्रकारको नेपालको कानूनले अपराध मान्दो रहेछ । मैले हाल यस प्रकारको हाड नाता करणी गर्ने गरेको छैन । तपाइहरुलाइ पनि सकभर यस्तो प्रकारको हाडनाता करणी नगर्न अनुरोध गर्दछु ।
धारामा नुहाएको, मेरो लिङ्ग